Fanohanana amin'ny kiho
Fisorohana UV / hatsiaka
Fanohanana amin'ny lohalika
Fanohanana famaky sy ombilahy kely
Mandehana mankamin'ny ozinina
Fanombanana ny mpanjifa tena izy
Ekipa teknika famolavolana
Fomba fampiasa mitovy amin'ny fehikibo malaza amin'ny olo-malaza
Misy seho malaza isan-karazany any Shina tato ho ato, izay kintana vehivavy 30 no mifaninana amin'ny sehatra iray ihany, izay tsy vitan'ny hoe mitondra fampisehoana ampahibemaso mahafinaritra ny mpijery, fa mitondra vokatra marobe mitovy endrika aminy ihany koa, toy ny fanitsiana fihetsika nataon'i Zhang Yuqi fehikibo amin'ny fiofanana. Rehefa ...
Tsy fifankahazoan-kevitra efatra momba ny squats
Samy hafa ny fomba fanatanjahan-tena. Tsy afaka manao toy izany amin'ny fanazaran-tena mahazatra isika, fa tsy maintsy mahita ilay mety amintsika. Satria ny fihetsika tsy mety sasany dia tsy tsara ho antsika fotsiny fa manimba ny vatantsika koa. Avelao aho hampiditra ireo tsy fahazoan-kevitra lehibe efatra momba ny squattin ...
Ny fomba hisafidianana ny lohalika dia manohana ara-tsiansa
Mahatsiaro tsy mahazo aina kely eo amin'ny lohalinao ve ianao rehefa avy nihazakazaka nandritra ny fotoana ela, ary matetika ny ray aman-dreninao dia mitaraina noho ny fanaintainan'ny lohalika rehefa mihalehibe izy ireo? Tokony hividy fanohanana amin'ny lohalika ve ianao? Ity lahatsoratra ity dia hizara fahalalana mahasoa momba ny lamborin'ny lohalika. Samy hafa ny palitaon'ny lohalika ...
Fanatanjahantena telo mety indrindra amin'ny ririnina
Amin'ny vanim-potoana ririnina mangatsiaka, raha manantitrantitra fampihetseham-batana mety ianao, dia tsy afaka mifehy ny havokavoka qi fotsiny, fa manatsara ny hery fiarovan'ny sela sy taova samihafa ary ny fahafahan'ny vatana manohitra ny fanentanana mangatsiaka ivelany. Manam-pahaizana momba ny fanatanjahan-tena milaza fa ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina dia tokony hafana ...
Ahoana no fanazaran-tena ataon'ny ankizy?
Rehefa lehibe ny zaza dia tsy tokony hifantoka amin'ny sakafony fotsiny fa tokony hampihetsi-batana tsara amin'ny vatany koa mba hanatsarana ny fitaizan'ilay zaza ara-batana. Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka koa dia mety hanatsara ny fiarovana ny zaza. Noho izany, ahoana no fanazaran-tena ataon'ny ankizy? 1. Azonao atao ny mamela ny zanakao hihazakazaka na mitaingina bisikileta ...
Ahoana no iarovan'ny mpilalao NBA ny kitrokeliny
Ireo namana izay tia ny lalao NBA dia mahalala fa mba hampisehoana vokatra tsara kokoa amin'ny lalao dia manana fomba fiofanana mahery vaika ny mpilalao. Ka ahoana no hiarovany tena tsy haratra mandritra ny fanatanjahantena? Andao hojerentsika ny fomba niarovan'izy ireo ny kitrokeliny. 1. Manaova fehikibo Mampiasà bandy manokana hamatorana ny ...
Fahalalana momba ny bisikileta
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny bisikileta dia nipoitra mangina tao amin'ireo tanàna ho fomba fanatanjahan-tena ambany karbaona, sariaka ary mahasalama. Ny bisikileta dia fanatanjahan-tena tena tsara, fa aza mitaingina mafy fotsiny, fa jereo ihany koa ny fihetsika mitaingina tsara, sao hiteraka injurie sport ...
Fahasimbana amin'ny vatana ateraky ny fihazakazahana mihoa-pefy
Amin'ny fiainana, ny fampihetseham-batana mihazakazaka mety ho an'ny fahasalamantsika. Na izany aza, ny fanatanjahan-tena mihazakazaka dia manimba ny vatana, noho izany dia tsy maintsy tadidintsika ny maka vola mety rehefa manao fanatanjahan-tena. Koa satria ny habetsahan'ny be loatra dia mety hiteraka fahasimbana, andao hiresaka ny fahavoazana izay mihazakazaka be ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny ratra amin'ny fanatanjahan-tena rehefa manao ski
Rehefa tonga ny ririnina dia maro ny olona mieritreritra fa hihena ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina, saingy tsy izany no izy. Malaza be ny fanaovana ski ambony ankehitriny. Mampientam-po sy lamaody izy io, noho izany dia mahasarika olona maro foana, fa miaraka amin'izay koa, ny fanatanjahan-tena dia fanatanjahantena tafahoatra ihany koa izay tena mora maratra. Rehefa ...
Inona no azontsika atao ao an-trano mandritra ny valanaretina
Mafy ny valanaretina eran-tany ary efa nisy fiatraikany lehibe tamin'ny asa sy ny fiainantsika. Betsaka ny olona mijanona ao ambadiky ny varavarana mihidy ao an-trano mba tsy ho voan'ny virus. Mba hisorohana ny isan'ny be olona dia tsy mahazo miditra ny toerana maro toy ny sekoly, orinasa, toeram-pivarotana, gym, sns. Man ...
Ahoana no hialana amin'ny fanatanjahantena tafahoatra?
Raha ny tena izy, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fanatanjahan-tena bebe kokoa, ny tsara kokoa, satria ny ankamaroan'ny olona dia mbola lavitra ny hahatratra ny haavon'ny asa be loatra mety hanimba ny fahasalamany. 1. Tsy manana fenitra avo loatra na tanjaka be loatra: Ny olona sasany mametraka ny fari-piainany avo loatra, toy ny fananganana ny maratho ...
Ahoana ny fomba handaminana fanatanjahan-tena araka ny antonony
Fantatsika rehetra fa misy tombony maro ny fanatanjahan-tena, ka manao fanatanjahan-tena firy no mety? Azo atao ve ny manao fanatanjahan-tena raha tsy amin'ny alàlan'ny mandeha an-tongotra? Androany aho hiresaka momba ireo olana roa ireo, ary hampahafantatra ny fomba hisorohana ny fanaovana fanatanjahan-tena tafahoatra. Raha tsorina, ny fanatanjahantena dia azo zaraina amin'ny karazany telo: ny f ...